टेकु अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको अवस्था सामान्य – Upahar Khabar
टेकु अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको अवस्था सामान्य
प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०८:५० April 10, 2020
काठमाडौँ – कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि उपचार गर्ने टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल बिहीबार सुनसान देखियो । अस्पतालको प्राङ्गणमा केही स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको नाम दर्ता तथा कुन रोग लिएर आएका हुन् भन्ने जानकारी लिन बसेका थिए ।
टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पताल हरेक सरुवा रोगको उपचार गर्नुपर्ने देशकै केन्द्रीय अस्पताल भएकाले सरुवा रोगसम्बन्धी बिरामी यहाँ आइपुग्छन् । यद्यपि अहिले कोरोनाको भयमा अन्य बिरामी त्यति धेरै आएका छैनन् । कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राखिएको छ । होटलको कोठामा जे जस्तो सुविधा हुन्छ त्यही सुविधा दिएर सङ्क्रमित व्यक्तिलाई राखिएको छ । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले पहिले आइसोलेसन वार्डमा केही सुविधा नभएको बताए । कुनै सुविधा नभएका कारण बिरामी भाग्ने, डिप्रेसनमा जानसक्ने भएकाले आफू निर्देशक भएर आइसकेपछि अहिले टिभी, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका सुविधा राखिएको जानकारी उनले दिए ।
सङ्क्रमितको गतिविधि निगरानी गर्न निर्देशक डा. राजभण्डारीको मोबाइलमै व्यवस्था गरिएको छ । मोबाइलबाट उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने पूरै गतिविधि हेर्न सकिन्छ । सङ्क्रमित तथा आशङ्कित व्यक्तिहरूका लागि उपचारमा खटिनुभएका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले सङ्क्रमितको लाक्षणिक आधारमा उपचार गरिने बताए । हालसम्म कोरोनाको कुनै औषधि आइसकेको छैन, उनले भने, त्यसैले उनीहरूलाई कस्तो लक्षण भइरहेको छ, त्यही आधारमा उपचार गर्ने गरिन्छ । सङ्क्रमितलाई फोन तथा बाहिरबाट सोधिन्छ, कस्तो अवस्था छ, साह्रो गाह्रो अवस्था के छ, कसरी बसिरहेका छन् भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण लिइन्छ । उनीहरूको भनाइ अनुसार उपचार हुन्छ ।
हाल सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून भएकाले पनि सङ्क्रमितको व्यवस्थापन र उपचार राम्रो गरिएको छ । यदि महामारीको रूपमा कोरोना भित्रियो भने उपचारमा समस्या हुनसक्छ । आइसोलेसन वार्डमा अन्य व्यक्तिलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । रोग अन्य व्यक्तिमा सर्न नपाओस् भनेर यस्तो प्रतिबन्ध गरिएको निर्देशक डा. राजभण्डारीले बताए । तर दुःखको विषय सङ्क्रमितको स्वाब परीक्षण चारपटक गर्दा पनि कोरोना रिपोर्ट अझै पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभ रिपोर्ट देखुन्जेलसम्म बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न पाइँदैन । रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए पनि चिकित्सकहरूको निगरानीमा राखेर घरमा पनि छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ । चीनमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको दुई हप्तापछि पुनः परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएकाले पुनः कोरोना देखिन सक्छ भनेर उनीहरू छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना अपडेटः संक्रमितको संख्या १६ लाख नाघ्यो, मृतकको संख्या १ लाख नजिक
रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा स्थगित (विज्ञप्ति सहित)